Bug yakaonekwa kana iwe ukadzorera backup pa iPhone 6s | IPhone nhau
Vashandisi vakadzoreredza backup pane yavo iPhone 6s yakakanganiswa nechaona kuparara
Kunyangwe pasina chinofanira kuitika, ini ndinogara ndichikurudzira kuita yakachena kumisikidza patinoisa nyowani yekushandisa sisitimu. Kune vazhinji vashandisi vanogunun'una nezvazvo matambudziko muIOS 9 uye zvakare vashandisi vazhinji vanotaura kuti aya matambudziko anoenda kana kumisikidza kwaitwa kubva pakutanga. Iyo mikana yekukwevera dambudziko inowanda kana isu tikadzorera iyo backup kubva kune imwe kifaa uye ndizvo izvo vamwe vashandisi vaive neane-inch iPhone (4S, 5, 5c kana 5s) uye vane kudzoreredza backup yako pane iPhone 6s kana iPhone 6s Uyezve.
Dambudziko riri kusangana nevashandisi nderekuti pane nguva apo chikumbiro chakawedzerwa, sezvauri kuona mumufananidzo pazasi pemitsara iyi. Dambudziko rinongobata vashandisi vakadzorera iyo backup kubva kuICloud, vese avo vakadzorera iyo backup kubva iTunes kusununguka kweiyo bug.
Iwo mafomu ayo akawedzeredzwa anonyanya iwo eApple ayo akaisirwa nekutadza (kumba kwemupfuri ...) seWallet, Nguva, Tarisa, Calculator kana Hutano. Sezvaunogona kufungidzira, dambudziko nekuve nekuwedzera kunyorera nderekuti pane nzvimbo dzatisingakwanise kudzvanya uye hatigone kuwana dzimwe sarudzo.
Imwe yemhinduro, sekugara, kudzoreredza mudziyo. Imwe ndeye kumisikidza iyo Zoom Mode kubva kuZvirongwa / Screen uye kupenya / SCREEN ZOOM, izvo zvinoita kuti Wallet ishandiswe zvakare, asi isu tichava neiyo yose iPhone yakakwidziridzwa, chimwe chinhu icho pachangu chisingandinyengere zvakanyanya.
Apple iri kutoshanda pane mhinduro kudambudziko iri, bhagi iro riripo muIOS 9 kubvira mabetas. Dambudziko ratogadziriswa mubeta rechitatu reIOS 9.1, saka isu tatoziva kuti Apple inoziva kugadzirisa iyi bhugi. Izvo zvisinganzwisisike ndezvekuti ivo havana kusanganisira gadziriso muIOS 9.0.2. Pachave nechitatu kuvandudzwa mumavhiki matatu eIOS 9?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 6s » Vashandisi vakadzoreredza backup pane yavo iPhone 6s yakakanganiswa nechaona kuparara
Mhoro matambudziko angu andisingakwanise kuwiriranisa iphone yangu iyo backup mushure mekudzorera yangu iphone uye iPad pachayo iyo app kubva idevice kuenda kuPC haina kupfuudzwa
Jetpack Joyride inogadziridza uye inowedzera "Kudzokera Kumangwana" zvemukati